Sina H Beam ho an'ny fanamboarana sy ny fanamboarana ny rafitra fametrahana ny masoandro | Rainbow
H Beam-pamokarana ho an'ny rafitra fametrahana masoandro
Miara-miasa betsaka amin'ireo mpamokatra mpamantatra tariby sy mpamokatra masoandro manerantany izahay mba hanampiana azy ireo hanatsara ny haben'ny habeny ary hampihena ny vidin'ny lozisialy. Amin'ny fiaraha-miasa aminay, ny mpamatsy dia afaka manatsara ny vokatra vidiny sy ny fandaharam-potoana fandefasana azy ireo hahazoana antoka ny tombony amin'ny fifaninanana.
Miara-miasa betsaka amin'ireo mpamokatra mpamantatra tariby sy mpamokatra masoandro manerantany izahay mba hanampiana azy ireo hanatsara ny haben'ny habeny ary hampihena ny vidin'ny lozisialy. Amin'ny fiaraha-miasa aminay, ny mpamatsy dia afaka manatsara ny vokatra vidiny sy ny fandaharam-potoana fandefasana azy ireo hiantohana ny tombony amin'ny fifaninanana.
Ny fitaovana dia vita amin'ny H-beam mahazatra an'ny amerikana malalaka miaraka amin'ny fenitry ny ASTM A6. Ny naoty vy dia azo fidina eo anelanelan'ny ASTM A572 GR50 / GR60, ASTM A992 na Q355. Ny galvanizing mafana dia mihaona amin'ny fenitra ASTM A123, ISO1461 ary AS / NZS4680. Mazava ho azy, faly koa izahay fa mihaona fenitra hafa momba ny kalitao sy ny hatevin'ny HDG samihafa ho an'ny mpanjifanay, satria fanaonay ny mamaly haingana ny filan'ny mpanjifa ary mihetsika avy hatrany. Ny lisitra maharitra maharitra an'ny orinasa amin'ny famaritana mahazatra ny fefy WF 2000 taonina, mba hahafeno ny fepetra takian'ny mpanjifa haingana indrindra.
Ankafizinay ny tetikasan'ny mpanjifanay rehefa mankafy ny vokatray izahay. Miara-miasa amin'ny mpanjifantsika izahay hatramin'ny nanombohan'ny tetikasa, vahaolana tsara kokoa amin'ny famonosana entana sy famoahana entana; ny fandaharam-potoana fandefasana maivana kokoa sy ny fanaraha-maso ataon'ny antoko fahatelo dia samy hanana ny sainy ihany eto. Na dia vita aza ny tetikasa dia mbola afaka miantehitra amin'ny serivisinay aorian'ny fivarotana ny mpanjifantsika manerantany hahazoana antoka fa hampiasaina amin'ny fomba mandaitra ny vokatra ao anatin'ny fotoana maharitra.
Ny hatevin'ny flange
Ny lanjan'ny teôria
Teo aloha: Sodina Steel Sodina
Manaraka: IBC Frame Tube sy kojakoja
Rafitra miorina amin'ny masoandro
Fanohanana amin'ny Solar Mounting
IBC Frame Tube sy kojakoja
Pipa vy mifono vovoka
Cold Formed Welding HB 2 B profil
Nandrisika tsipika, nandrisika taratasy, kalitao gal ...
Coil vy vita amin'ny herinaratra elektrika milomano mahery, GI, ...